Ladagaallanka Burcad badeedda Afrika - BBC News Somali
Ladagaallanka Burcad badeedda Afrika
Image caption Burcadda badaha Soomaaliya oo howlgalkooda uu gaabis galay
Baaritaan cusub oo laga sameeyay burcad badeednimada ayaa lagu ogaaday in ay hoos u dhacday Bariga Afrika, balse ay adkaatay la dagaallanka Galbeedka Afrika.
Mashruucan oo loogu magac daray Oceans Beyond Piracy (Badaha ka baxsan burcad badeedda) o ay soo diyaarisay ha’yadda One Earth Future, ayaa lagu darsay khasaaraha naf iyo maal ee ay geysteen sanadkii lasoo dhaafay burcad badeeda badaha Soomaaliya iyo Gacanka Guinea.
Warbixinta ayaa sawir wanaagsan ka bixinaysa dadaallada lagula dagaallamayo burcad badeedda baddaha Bariga Afrika.
Dhaqaalaha ku baxay la dagaallanka burcad badeedda Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay, ayay warbiixintu ku qiyaasay 3 bilyan oo dollar, iyada oo ay Beesha Caalamka isticmaashay ku dhowaad 140 milyan oo dollar si ay uga hortagto halkii weerarba.
Kharashkaasi ayaa u muuqda mid badan, balse waxaa boqolkiiba 50 uu ka yaryahay kharashkii ku baxay la dagaallanka burcad badeedda Soomaaliya sanadkii 2012-ka.
Weerarrada burcad badeedda ay ku qaadaan maraakiibta ganacsiga ayaa hoos u dhacayay sanadihii lasoo dhaafay, waxaana sanadkii tegay ay weerarreen 23 markab.
Balse mashruuca Oceans Beyond Piracy (Badaha ka baxsan burcad badeeda) ayaa sheegay in isku celcelis 54 la haystayaal ah ay qabsadeen burcad badeedda 3-dii sano ee lasoo dhaafay.
Dhanka kale, dhaqaalaha ku baxay la dagaallanka burcad badeedda Galbeedka Afrika ayaa baaritaanku ku sheegay 600 oo milyan oo dollar, balse waxaa uu tilmaamay mid khatar badan leh.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in 100 weerar ay burcad badeedda ka geysteen Galbeedka Afrika sanadkii lasoo dhaafay, ayna xoogga saareen afduubka shaqaalaha maraakiibta.
Dadaalka lagula dagaallamayo Burcad badeedda galbeedka Afrika ayaa waxaa adkeeyay iyada oo ay kooxaha burcadku yihiin kuwo aad isugu xiran, sida lagu sheegay warbixinta.
Hay’adda warbixinta soo saartay ayaa ka digtay iskaashi la’aanta ku aadan la dagaallanka burcad badeedda galbeedka Afrika, waxaana ay ku talisay in la sameeyo ciidamo caalami ah oo uladagaalama kooxaha burcad badeedda ah si lamid ah sida ka jirto badaha Bariga Afrika.